Sexy သုံး နတ်ပြည်မုန်း LT | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » Sexy သုံး နတ်ပြည်မုန်း LT
Sexy သုံး နတ်ပြည်မုန်း LT
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Mar 24, 2014 in Aha! Jokes, Satire | 20 comments
ဂုတလော ရွာဒဲမှာ အယ်လ်တီ လက်မထပ်ဘဲ အတူချ အဲ.. အတူနေဒဲ့ အရေးကိစ္စ ဟော့တ်နေလေတော့ အနော်လည်း ခါတော်မှီ ပေါဂျင်ဒယ်။ ဃလိုဗြ.. လက်မထပ်ဘဲ အတူနေတဲ့အခါ ပေါဂျသလို ဟန်ဆောင်မှုဒွေ ကွာသွားလို့ ကတောက်ကဆဖြစ်မှာ အမှန်ဗဲ.. ဒါငြင်းမရ..။ တဖက်မှာလဲ တဇိမ်းတယံကနေ မိဘပေးစားလို့ ယူပီး ခြစ်သွားဂျ အဆင်ပြေနေတာလည်း အောလဗုံတိုက်.. အဲလိုမျိုး အားကျပြီး မိဘစဂါး နားထောင်ဗျံဒေါ့ ဇုံဒွဲတိုင်း အဆင်ပြေရဲ့လား၊ အိမ်ထောင်ယေးကံဆိုဒါ ရှိသေးအိ..။ ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုယ်သုံးဒါ ဘယ်ကောင်မှ သောက်ဂရုမစိုက် အယ်လ်တီ ကာမပွဲတော် ဆင်နွှဲသူများရော လိုဂျင်ဒဲ့ဘွ အများဇု ရရဲ့လား… မထိန် မထိမ် ကကြောင်ကြီး လုံးဝ မီထိန်…။ အဲလိုဇုံတွဲ ဖြစ်တတ်တာ ကဲလို့ဝဒေါ့ (အဲဒါဂိုဗဲ ကြက်ရင့်တယ်ခေါ်တယ်)။ သောက်လေသောက်လေ ငတ်မပြေ ဆိုသော်ငြား နောက်တက်လာဒဲ့ ကားတွေကို အသက်အရွယ်အယ မယှဉ်နိုင်လေဒေါ့.. အင်း..အဖြစ်ချေဗူး.. နံဗက်တခု ချိတ်ထားလေမှဆိုပြီး ဒူဒူခြင်း ဗူဗူဂျင်း တွေ့တယ်။ အဲဒမှာ ဟုတ်သလို ရှိသွားတာ။ သိပ်လစ်ဗရယ်ကျဒဲ့ နေရာမိုးမှာ ပေါဗာဒယ်။
မြန်တျန့်ပြီလိုမိုးကျတော့ တမိုးဗ..။ ဖိုလ်ဂျီးဝါဒ ထွန်းကားသမို့ (ကိုယ်တိုင်လည်း အပါအဝင်) လင်ဂေါင်း နွာခေါင်း လိုဂျင်လျင် အနေအထိုင် ဆင်ခြင်သင့်တယ်။ အစွန်းရောက် လူနည်းစုကတော့ ခြွင်းဂျက်ပေ့ါဗျာ။ ကိုယ်ဃ အဲလိုလူဒဇုထဲ ပါနိုင်လျင်ပါ.. နို့မို့လျင်ဒေါ့ ကိုယ်ပစ္စည်းကိုယ် သော့ခတ်တာ အကောင်းဇုံးဗဲ..။ ထားဗာဒေါ့ ခါးလာကော့…. ပေါဂျင်ဒါ တိုတိုမို့ စာရှည်စာခန့်အောင် ခြေဆင်းပျိုးရင်း လိုရင်းအရောက်နိုင်ဗူး။ အဓိကဂ အဓိကပဲစ်.. လက်မထပ်ခင် အတူနေနေ မနေနေ.. အရေးကြီးဒါ စက်ဗျ..။ စက် သိပ်အရေး ပါဒယ်..။ နာနာတီးရမည်..။ အိပ်စ်စပို့ ပုဇွန်ထုပ် နန္ဒာလှိုင် ဟုတ်ဖူးနော်…။ စက် စက်.. သုံးသုံးလီ ကိုး.. လေးလေးလီ ဆဲ့ခြောက်.. ငါးငါးလီ နှစ်ဆဲ့ငါး.. ခွီး…. အဲလာဒေါ့ ပိုသွားဗီ.. အဖြစ်နိုင်ဗူး..။ အဲဒီစက်ပေါ် ပုံအော မြှုပ်နှံရမယ်။ ဆိတ်ရောကိုပါ (ဖတ်ရွဲ့အဖွဲ့ ငှက္ကထ ဦးပါမဟုတ်ပါ) ခြေစုံပစ်ဝင်ရမယ်။ အချိန်ဒိုင်း စက် စက် ဖြစ်နေရမယ်။ စက်ဆီဖြည့်တယ်ဆိုဒါ အဲလာမိုးပေါ့….
စက်ကို သိုးဆောင်းဘာသာနဲ့ machinery လို့ခေါ်တယ်။ ဒါပေသိ အနောပေါဂျင်ဒါ ပိုမြင့်တယ်..။ အလွယ်ဆုံး ဖြစ်အောင် စက်သုံးလိုက်တာ။ တဂယ်ဒန်းဂ အိမ်မှုကိစ္စ၊ လုပ်ငန်းဆောင်တာဂို automation အလိုအလျောက် ဖြစ်အောင် စီစဉ်ဖို့ အော်တိုငုတ်တုတ် နည်းပညာ စဉ်းစားခိုင်းတာ။ ဥမပါဗျာ.. ဘဏ်ငွေသွင်း ငွေထုတ်ကို ဖစ်နိုင်လျင် လူကိုယ်ဒိုင် မသွားဘဲ အွန်လိုင်းလုပ်၊ သွားလည်း teller ဆီသွားမည့်အစား အေတီအမ်စက်သုံးပါ။ နောက်ထပ် မြင်အောင်ပြလျင် ရီမုတ်ကွန်ထရိုး မပါ အဲယားကွန်း ပေါချောင်ကောင်းအစား ဈေးပိုကျီးဒဲ့ ရီမုတ်ကွန်ထရိုး အဲယားကွန်း ဝယ်တပ်ခိုင်းတာ။ လိုအပ်လို့သုံးဒါ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလဗျာ..။ အဲလိုဗဲ တော်ရုံကိစ္စ အရေးအရာတွေမှာ ထွေလီကာလီ ချေးများမနေဗဲ သူ့အလိုအလျောက် ပြီးမြောက်အောင် လုပ်လို့ရတဲ့ နည်းလမ်းတွေရှိတယ်.. လိုလျင်ကြံဆ ဖြီးဖြန်းရဒဲ့ ဆိုရိုးရှိသားဗဲစ်။
အချိန်ပိုထွက်လာမယ်.. လူသက်သာမယ်.. ဇုန်တွဲတွေအတွက် အဲဒါ သိပ်အရေးပါတယ်။ ငွေပိုလျှာချဉ်သလား၊ ယာယာထဲ ပိုကဲချဉ်သလား… ခယီးထွက်ချဉ်သလား.. မိသားဇုအတွက် အချိန်ပိုပေးချဉ်သလား.. အားလုံး အဆင်ပြေသွား ဇေယျမယ်။ သဂျီးဦးခိုမ်ဆို ခါးမှာ နာနိုတက်ကနော်လော်ဂျီသုံး မော်တာသေးသေးလေးတလုံး ခွဲစိတ် ထည့်ထားတယ်။ အချိန်ကျလျင် စက်ဖွင့်ရမ်းလိုက် ယုန်ဘဲ။ သဂျော်ဂဒီးကလည်း အခေဗူး.. အားကျမခံ ရီမုတ်ကွန်ထရိုး ဆောင်ထားဒယ်။ သဂျီးစက်ကို လိုဒဲ့အချိန် ရီမုတ်လေး နှိပ်ဖွင့်လိုက်ယုန် အနှေးအမြန်လုပ်ပီး သဂျီးကို မောင်းဒါ။ ခါတလေများ စက်လည်နေဒုံး ယောင်ပြီး pause မှားနှိပ်မိလျင် သဂျီးခမြာ ဟတ်ကော့ဂျီး.. အဲလို.. အဲလို… ဖြစ်ပုံများ ပေါပါဒယ်.. ကွိ ကွိ ကွိ။
သဂျော်ဂဒီး ခလုပ်မှားနှိပ်မိသဖြင့် သဂျီးဂျွမ်းပစ်နေဘုံ
နောက်ဆုံးတော့ ကကြောင်ကြီးလည်း ကွမ်းစားဘေးပစ်ပါတကား
ဟဟဟ အဲဒီ နာနိုနည်းပျင်ညာသုံး စက်ကြီး ရီမုကြောင်ပြီး ရပ်မရမှ.. ဒုက္ခဖြစ်နေမယ်.. ခွီခွီခွီ…
ဒက်ကြောင်ဇဂါးနားထောင် သော့ခတ်ပီးမှ သော့ပျောက်နေ ဘိုလုပ်မဒုံးးးး
Keys Master ကိုရင်ဆာမိကို ခေါ်လိုက်လေ
ဒီလိုပုံတွေ ရှာရှာဖွေဖွေ တင်တတ်လို့ပဲ။ :boss:
နားလည်သလိုလို မျတ်ချိလည်သလိုလို ဘာလိုလို ညာလိုလို သိသလိုလို မသိသလိုလို ဖတ်တွားဒယ်…
သိကြားမင်း နာမည်ထည့်ထားပေမင့် နတ်ပြည်နဲ့ ဘာမှ ဘာမှ မဆိုင်တဲ့ကိစ္စပါ။
ဆိုတော့ နတ်ပြည်မှာ အဲဒီ တစ်ရာတစ်ဆယ့်တစ်ပါးသော မင်းတွေကို black list သွင်းထားပါတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းးး
တူဒို့လုပ်ခါမှ နတ်မင်းကြီးလေးပါးခမျာ နက်ရရှာတော့ဒယ်… တေဟ..
ဒီရွာထဲမှာ နတ်တို့သနင်း သိကြားမင်း ရှိတာပဲဟာ။
သူနဲ့ လက်ထပ်နိုင်ရင် ကိုယ့် လိပ်ပြာ အလှဆုံးနေမှာပဲ။
တဂျားတော့ ခေါင်းဆင်နင်းဘီ…. အဲလေ.. စွန်ဘီ
နပ်​ပြီမာလယ်း LT နဲ့​ဏေကျဋာကျာ​ပေါ့ တူရို့ ဗယ်​တူက မင်​ဂါ​ဆောင်​​ပေးရို့လဲ တူ့ဗုံစည်းယိုး​ပေါ်​ပေါက်​လာတဲ့ နပ်​မ ​ကောက်​ယူခွင့်​ယှိဒါဂို
အဟိ……အဟိ……တွေးလည်းးတွေးတတ် ရေးလည်းရေးတတ်တဲ့ အူးးကြောင်…..
Chotto mr. Katto anata wa mada fūshi kiji o kaku koto ga dekimasu. Anata no atarashī basho ni subete no saikō. Sayōnara.
Mr.cat you will be able to writeasatirical article stillalittle. The best of all to the new location of your. Goodbye.